Fitsangatsanganana an-trano - Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.
Ny orinasanay dia miorina ao Zhejiang China. Ny toerana mahafinaritra sy toerana mety mankany amin'ny seranam-piaramanidina. Miaraka amin'ireo mpiasa matihanina sy ny tsipika famokarana, ahafahanay mahafeno ny fepetra takian'ny vokatrao.
Huaxiajie dia mpanamboatra manokana ny rindrina sy ny valindrihana amin'ny PVC, ny bobongolo vita amin'ny foam, ny mombamomba ny PVC / WPC ary ny decking ivelany PVC / WPC. Mifanentana amin'ny tontolo iainana ny vokatray.
Raha omena vintana sy toerana feno dia hasehonay anao ny tombotsoanay rehetra ary ndao hiara-hihalehibe isika. Azoko antoka fa afaka mametraka fifandraisana orinasa maharitra sy sariaka amin'ny orinasanao mendri-kaja ianao noho ny fahatokisanao sy ny serivisinay tsara.
Izahay dia mitady fiaraha-miasa marina amin-kitsimpo sy iraisana amin'ireo mpanjifa eran'izao tontolo izao. Izahay dia afaka ny ho mpamatsy anao tsara indrindra amin'ny vokatra bobongolo maro karazana, koa afaka manome serivisy OEM sy ODM izahay.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny tsenan'ny lasitra, ny departemanta R&D an'ny orinasanay dia manana injeniera matihanina hifantoka amin'ny fampivelarana vokatra.Ny departemanta R&D dia tsy manaiky fotsiny ny tetikasa OEM, fa afaka mandray ny tetikasa ODM ihany koa.Miaraka amin'ny mpamolavola tena tsara dia hanao vokatra tontolon'ny rindrina tonga lafatra kokoa izahay hamaly ny fepetra takian'ny mpanjifa sy ny tsena amin'ny ho avy.